HONEYSUCKLE DECORATIVE: SHARAX, NOOCYO IYO NOOCYO - DHARKA UGU SAREEYA
Faahfaahin buuxda oo ku saabsan dabeecadaha warshadani waxay isku dhafan yihiin is-khilaafyo badan. Qoyskan waxaa ku jira xayawaan badan oo hooseeya. Nooca Wood iyo lianovidny. Iyadoo miraha dhadhan fiican leh ama hababka qurxinta. In ka badan 200 nooc oo warshadaan ah ayaa loo yaqaan.
Honeysuckle qurxinta: noocyada iyo noocyo
Honeysuckle decorative inta badan waxaa ku jira noocyada leh qaab muuqaal ah baadiyaha. Waxay si fiican u Bloom-xilliga guga-xagaaga, sidaas darteed noocyadaas ayaa si guul leh loo isticmaalo beerta.
Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo ah kuwa ugu caansan: Honeysuckle brown iyo honeysuckle. Midka ugu horreeya wuxuu kala diraa laamihiisa ilaa 6 mitir, laakiin waxay kor u kici kartaa ilaa 2.5 mitir. Kaprifol waa wax kasta oo ku jira jidka. Qalabka qurxinta ee ku haboon ee kor loogu qaadayo geeska jacaylka, tusaale ahaan, gebebos. Waxay abuurtaa dabbaal aad u qurux badan.
Waa muhiim! Kaprifol waa warshad kuleyl ah, oo dhinaca woqooyiga ahna lama noolaan karo.
Caleenta sharootada leh waxay samaysaa daraasado gaar ah kaas oo ubaxyo casaan--casaan u muuqda, kadibna - miraha guduudka ah. Honeysuckle Brown waa dabayl badan iyo kuleyliyaha kaliya ee hoos cover. Marmar, ugu yaraan laba jeer sannadkii, wuxuu kala-baxaa orange. Gobollada ay jiraan qaboobaha qaboobaha, Honeysuckle Brown ma midho dhaleen. Midabada ugu quruxda badan waa darajooyinka "Fuchsioides" iyo "Dropmore Scarlet".
Noocyada ugu caansan ee noocyada baadiyaha ah waa honeysuckle luuqadda Ingiriisiga. Warshadani waxay si fiican u habboon tahay qaboobaha adag. Gaarayaa geed ku yaalla dhererkeedu yahay ilaa 2.5 m, waxayna billaabmaysaa inay ka buuxdo da'da saddex jirka. By dhamaadka guga, honeysuckle noqdo casaan, taas oo dambe noqon midho guduudan. Qalabka ubaxa waxay ku kala duwan yihiin noocyo.
Waa muhiim! Haddii ciidda beertaada aysan ku filnayn bacrimin, waxaa lagula talinayaa in lagu beero duurfeero dhowr ah oo kala duwan oo ah meelo kala duwan oo leh meelo qorrax leh. Waxaa aan qabin xaaladaha dabiiciga ah, koraya ilaa hal mitir iyo badh, iyo ubaxyo qurux badan oo hooska jilicsan koraan on.
Si aad u milicsan palette beerta, dhirta alpine honaysuckle. Tani waa nooc ka mid ah honeysuckle, gaaraya dhererka ku saabsan mitir iyo siinaya miraha cas cas. Sidoo kale, huruudku wuxuu siinayaa buluug sharaf leh. Guga, waxaa ka buuxa ubaxyo cagaaran iyo cagaaran, kuwaas oo lagu beddelay midab buluug ah bartamaha xagaaga.
Honeysuckle la beeray si ka fiican dayrta. Si dhirta loo gooyo sida ugu wanaagsan ee suurtagal ah, waxaa fiican in ay helaan duurka dhowr ah markiiba. Haddii honeysuckle loo beeray sidii dusha sare, markaa waxaad u baahan tahay inaad fogaato wax ka badan nus mitir. Xaaladda kalluunka si gooni u koraya, waa inay ahaataa nus mitir.
Waa muhiim! Ka fikir inaad hore u sii qaaddid meesha caga-barafka, sida dhirta ay ku noolaato ilaa 35 sano.
Xagee loo beeraa
Sidaas darteed honeysuckle beertaada waa had iyo goor farxad u ah isha, iyo deggenaashiisa iyo daryeel dheeraad ah ma ay keentay dhibaato, Shuruudaha soo socda waa in la tixgeliyaa:
Carrabku waa inaysan lahayn jawi ashyaa. Wixii caadiga ah ee noocan oo kale ah lime loo isticmaalo, kaas oo lagu soo bandhigay ciidda ee qaybaha qaarkood.
Qoyaanku waa inuu ahaado mid dhexdhexaad ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee rhizome ma ahayn ururinta biyaha.
Honeysuckle Blooms ka fiican meelaha iftiimay, inkasta oo ay ku koraan ee hooska.
Honeysuckle - warshad qoto dheer. Si looga hortago dabaysha waxyeellada caleemaha, ubaxa iyo miraha honeysuckle, ha ku dhex beerin meelaha sare.
Tijaabi inta ugu badan ee suurtagal ah si aad u caddeeysid iibiyeyaasha oo dhan faahfaahinta ku saabsan geedka la helo: noocee, waxa miraha dhadhanka u eg, wakhtigii ay fruiting, dhalidda ka mid ah baadiyaha iyo tan kale.
Waa muhiim! Mararka qaar xirfadlayaal khibrad leh ayaa khalad ku ah noocyada geedo. Sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa in lagu iibsado geedo oo keliya ee xanaanooyinka ama bannaanka u gaarka ah kuwaas oo si madax bannaan u koraya honeysuckle oo iibiya alaabtooda.
Talooyin markaad dooranaysid geedka siddeed dhirta:
Beeraha dhirta kaliya laba ama saddex jir. Xaaladdan, muddo labo sano ah waxaad yeelan doontaa goosashada wanaagsan.
Laamaha dhirta waa inay ahaadaan kuwo dabacsan, oo aan qalalan, iyadoon waxyeello lahayn. U hubso inaad si taxadar leh u hubiso baadiyaha.
Haddii aad aragto maqaar yar oo ka mid ah jilif of geedo, ha u ogolaan tan tan kuu ceeb ah. Tani waa muuqaal dhaqan ah.
Iska ilaali xididada. Waa inay noqdaan tuulo. Isku darka ayaa noqon doona jiritaanka burooyinkeeda oo ku taal laanta.
Waxaa fiican inaad iibsato dhowr nooc oo kala duwan oo ah Honeysuckle, ugu yaraan saddex. Dhawaan waxaad ku dhufan kartaa naftaada.
Ma taqaanaa? Boqolaal ka mid ah noocyada la yaqaan ee Honeysuckle, kaliya qaar ka mid ah iyaga waa la cuni karaa. Caanaha ugu caansan oo dhan noocyo aan la dabooli karin waa wolfberry.
Sida loo abuuro honeysuckle
Xayirada ku dheji 40 cm³ fogaan ah hal mitir iyo mitir nus ah oo midba midka kale, haddii noocyada soo degay ay hoos u dhaceen, iyo 2.5 m ee noocyada dheer.
Dhinac kasta waxaad u baahan tahay inaad ku dhajiso laba baaldiyo oo ah compost, 50 g of superphosphate iyo 1 kg oo ash. Haddii ciidda ay aad u hodan tahay ciidda, ka dibna ku dar hal baaldi dheeraad ah iyo bacriminta potash ka kooban ee qiyaasta compost.
Ku shub biyo ceelasha. Ka samee alaabta ilaa qoyaanka si siman loo qaybiyo. Bartamaha godka, samee tuulo yar oo ku rid seedling. Roots waa in si siman loo qaybiyo tuulada. Ka saar xididdada jaban oo qallalan.
Ku rid compost yar yar godka ku shub biyo. Dhulku waa inuu ku dheggan yahay xididada si fiican. Buuxi si buuxda oo fiican iyo biyaha si fiican. Tan iyo markii xididdada Honeysuckle si tartiib ah u koraan, ka dibna u biyo iyada oo kaliya xididka.
Ka dib markii soo degitaanka honeysuckle u baahan tahay si degdeg ah mulch dhulka ku wareegsan.
Marka laga beerto geedo Honeysuckle, beddelaad u dhexeeya noocyo kala duwan. Tani waxay noqon doontaa pollination ugu wanaagsan inta lagu jiro xilliga ubax, kaas oo ku siin doona dhalidda ugu fiican. Waxaa jira dheddigga labka iyo dheddigga ah, pollination of kaas oo dhacaa iskutallaabta.
Honeysuckle ee manjooyin ka dib markii beerto ah uma baahnid. Tani waxay si weyn u daahin kartaa gelitaanka duurka ee marxaladda fruiting.
Iska ilaali duurka muddo saddex sano ah. Ka dibna waxaad ku raaxeysan kartaa miraha delicious.
Ma taqaanaa? Miraha Honeysuckle waxay saameyn ku leedahay nidaamka wadnaha iyo xididada, waa choleretic wanaagsan, antiseptic iyo durayo. Miraha waa wanaagsan ee soo saarista casiir gastres iyo hagaajinta dheefshiidka.
Honeysuckle ayaa loo baahan yahay: waraabinta joogtada ah, jaridda dhirta, dabacsanaanta ciidda, caleenta, codsiyada wakhtiga ah ee Bacriminta, manjooyin sax ah iyo ilaalin kasta oo noocyada cayayaanka iyo cudurrada.
Honeysuckle Biyaha waa in ay ahaato mid dhexdhexaad ah iyo cimilada qallalan. Marka la gaaro xilliga guga iyo xagaaga, waraabinta waa in la kordhiyaa si looga fogaado qadhaadhka goosashada. Haddii cimiladu aanay aad u kululayn, oo leh roobab yar oo caadi ah, ka dibna waraabinta waa in la sameeyaa ilaa 4 jeer xilli ciyaareedkiiba. Under kasta baadiyaha waxaad u baahan tahay inaad ku shub ugu yaraan 10 litir oo biyo ah.
2 sanno ka dib marka ay soo baxdo sharaabka cagaarka ah, daryeelka gaarka ah looma baahna. Muddadan, duurka waa in aan la quudin. Bacriminta waxay u baahan yihiin in la sameeyo sanadka saddexaad. Waxay doortaan arrimo dabiici ah. Dhammaadka xilliga dayrta, u qaybinta 5 kg ee compost, 100 g oo ah ash iyo 40 g oo ah superfosfate laba mitir kasta labajibbaaran. Kahor furitaanka kelyaha xilliyada gu'ga, ku dar kiimiko amooniyam oo ah saamiga 15 g mitir labajibbaaran. Waa suurtogal inaad ku shubto 10 litir oo biyo ah ka yar barkeed kasta oo leh qaado oo ah HOL.
Wixii markii saddexaad ee xilli ciyaareedka, honeysuckle waxaa la quudiyey ka dib markii fruiting. Bilowga Luulyo, waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso dhulka adoo xal u ah nitroammofos oo ah 30 g oo baaldi biyo ah. Waxa kale oo aad milicsan kartaa 2.5 kg oo ah slurry 10 litir oo biyo ah.
Marka ciidda si ku filan loo qoyay, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo daboolo, isla mar ahaantaana ay ka saarto haramaha. Xakamaynta dhaqanka caadiga ah, tan iyo xididdada Honeysuckle ma aha mid qoto dheer. Haddii uu jiro mulch oo ku yaal sawirka, u gudub nidaamka iyada oo loo marayo, laakiin kiiskan, inta badan wax yar.
Honeysuckle ayaa aad ugu mahadcelinaysa mulching, maadaama ay u oggolaanin haramaha si ay u koraan oo ka hortagaan kulaylka ah ee lakabka ciidda sare, oo ay ku xigtay qalajinta. Mulch waxay noqon kartaa peat, balka, wargeysyada ama humus.
Weedhidda hareeraha duurka ayaa lagama maarmaan ah kadib markaad waraabiso. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro cayayaanka oo dhan. Xilliga dayrta, ha ka saarin caleemo qallalan oo ku wareegsan nidaamka xididka. Waa ilo dheeri ah oo ku saabsan korontada iyo alaabada kale.
Marxaladani ee beerista warshadu waxay door weyn ka ciyaareysaa oo leedahay sifooyin gaar ah, nidaamku wuxuu ku xidhan yahay noocyada kala duwan. Dammaanadda Honeysuckle waxay u baahan tahay manjooyin gaar ah oo joogto ah. Gooyaa waxay hagaajineysaa muuqaalka quruxda leh ee noocyada farshaxanka, bogsashada, waxay siinaysaa awood koritaanka kobcinta quruxda quruxda badan. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad dayactirto duurka kasta oo kasta. Xagaaga, waxaad u baahan tahay kaliya inaad ka saarto laanta farageliya dhirta.
Manjada ugu horeysa waxaa loo sameeyaa si khaas ah cabbirka loo baahan yahay. Dhammaan xiga - quruxda iyo ilaalinta qaabka la doonayo. Xaaladda noocyo la cuni karo, manjo ayaa lagama maarmaan u ah goosashada wanaagsan. Laakiin noocyada kuwan waa ka fiican oo aan la isku xidhin ilaa toddoba sano. Gooyo kiiskan waa in lagu sameeyaa daryeel weyn, maaddaama koritaanka geedku uu aad u hooseeyo.
Ma taqaanaa? Haddii uu jiro geeska carruurta ee beertaada, waxaad ku qurxin kartaa honeysuckle Far East. Waxay kudhihi kartaa miraha leh dhadhan fiican iyo mid caafimaad qaba oo carruurtu jecel yihiin.
Honeysuckle wuxuu ku dhufan karaa abuur, adoo u qaybinaya duurka, gooyn iyo dhejinta. Qaab walba wuxuu leeyahay faa'iido iyo faa'idooyin gaar ah.
U faafi qaar ka mid ah berry bislaado on warqad jilicsan oo u kala bixiya santimitir kala gooni ah. Kadib markaad qallajisid, ku rid hal sano oo dhinaca dhinaca dambe ah, duub warqadda oo ku kaydi heerkulka qolka. Seeds waxaa lagu keydin karaa 2 sano.
Haddii aad rabto in biqil abuurka ah ee sanadka soo socda, ka dibna wax laga beerto laga helay June, waxaad u baahan tahay inaad ku riday ciid qoyan, xiran ilaa 1 mm. Ku rid weel qashinka lagu daro aqalka dhirta lagu koriyo ama hoostiisa. Hayso socodka qoyaanka ee dusha sare. Ka dib 20 maalmood waa inay bilaabaan inay eegaan geedo. Dhammaadka xilliga dayrta waxaad u baahan tahay inaad qaadato weelka beerta. Haddii noocyo kala duwan oo jiilaal-adag ah lagu beeray, ka dibna geedo hoostooda barafka ayaa si fiican u qaboobi doona jiilaalka.
Haddii lagu beerayo abuurka honeysuckle wuxuu dhacaa xilliga dayrta dhexe ama dhamaadka, marxaladda biqilka aqalka dhirta lagu koriyo waa in la boodo iyo sanduuqa hoosta barafka. Guga, waa inay bilaabaan koritaanka. Si loo dedejiyo biqilka abuurka, guga waa in lagu sameeyo lagu koriyo. Marka ay koraan 3 cm iyo 4-6 caleemo, geedo quus ah. Nidaamka waa in la sameeyaa iyadoo la raacayo nidaamka 5x5 ee sariirta beerta beerta.
Biyaha wiishyada, ka saar haramaha ka sariirta beerta, dabciyo ciidda. Sannadka soo socda, geedo ku-beddelasho sida waafaqsan nidaamka 20x20. 4 sano ka dib, geedo waxay yeelan doonaan miraha ugu horreeya. Go'aami dhadhanka berry kasta oo kasta. Kuwa jecel kuwa ugu badan, waa in lagu dhajiyaa deegaan rasmi ah. Ka dib 8 sano, heerkulka fruiting waxay kordhin doonaan si weyn. Geedo kale ayaa lagu dari karaa bowd cagaaran.
Ilaa 200 oo gooyn ayaa laga heli karaa mid ka mid ah geed caan ah oo caafimaad leh. Wixii faafin ah ee gooyn Honeysuckle, gooyn adag oo dhirta waa in la diyaariyaa guga hore, ilaa ay burooyinkoodii bilaabaan inay Bloom. Dhererka jarida waa inuu ahaadaa ugu yaraan 15 cm. Waxaad si toos ah ugu beeran kartaa beerta marka dhulku horay u soo baxay ka dib markii uu dhaxan yahay qaboobaha. Xiddiga guntooda dhulka ku dhaji ilaa 10 cm. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa in burooyinkooda sare ay ka sareeyaan dusha sare. Laga soo bilaabo kor, saxarada waa in lagu daboolaa filim koronto si markaa xididada loo sameeyo si sax ah. Gooynta waxay ku dhici doontaa xidid bil gudaheed.
Waa suurtogal in dacaayad adoo marsiiya marka honeysuckle uu ku koray baadiyaha qaangaarka ah. Bishii Juun, waxaad u baahan tahay inaad daboosho carrada agagaarka duurka iyo wax yar ka qaad tuulo. Qeybta hoose ee baadiyaha, dooro qaar ka mid ah caleemaha jilicsan ee da'da isku mid ah. U diyaari dhulka oo ku xir xargaha meelo badan. Ka dibna ku saydhaa lakabka carrada 5 cm iyo biyo si joogto ah. Iyadoo bilawga ah ee guga soo socda, iyada oo caawimaad ka heleysa xayawaan, kala saar lakabyada ka soo baxa hooyada iyo iyaga oo ku beddelan meel ay joogto ah. Laba sano kadib, lakabka kasta wuxuu noqon doonaa honeysuckle oo buuxa.
Gugta dambe ama xilliga dayrta, ilaa ay burooyinku bararsan yihiin, honeysuckle lix-jir ah ayaa loo qaybiyaa qaybo siman. Marka xigta, qaybaha waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo oo la dego meelo cusub. Haddii geedo loo doorto qaybta kala qaybsan si ay u noqoto mid aad u cakiran, dhirta ma noolaan doonto.
Waxaan leenahay honeysuckle for the jiilaalka
Noocyo badan oo hindhiso leh waxay u dulqaadanayaan xitaa xayrta daran ee hoos udhaca -50 ° C. Laakiin halkaan, tusaale ahaan, ma aha lahaansho dulqaad, sidaas darteed diyaarinta jiilaalka waa lagama maarmaan. Dhamaan dadka curyaamiinta ah waxay u baahan yihiin inay hoos u dhacaan dhulka, iyagoo ka saaraya taageerooyinka. Sidaa darteed, waxay si fiican u daboolaan qolof ah baraf ah. Waxaad ku dhejin kartaa barkin peat ah iyo dabooli leh caleemo dhir ah.
Roobabku marar dhif ah ayay xiiseynayaan Honeysuckle, sidaa daraadeed, ma si aad ah u waxyeeleynayaan jilifkeeda. Laakiin shimbiraha ayaa dhaawici kara burooyinkeeda. Si looga hortago tan, waxaad ku dabooli kartaa duurka iyagoo leh bacaha dijitaal ama mesh ganaax.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaasha qaarkood, honeysuckle waxay bixisaa caro yaraynaysa walaaca iyo dareenka.